သံမဏိမြှောင်, မြှောင်ထုပ်ပိုးသိုင်းကြိုး, သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိမြှောင်, သံထုပ်ပိုးသံမဏိ - JinHe သတ္တု
သိုင်းကြိုးထုပ်ပိုး Blued သံမဏိဖုတ်
သဘာဝသံ Pack သိုင်းကြိုး
ကျနော်တို့ကသံကြိုးသိုလှောင်သည့်အခါအာရုံစိုက်သင့်တယ်သံကြိုး corrosion.What ဖြစ်ပေါ်စေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်? သတ္တုကြိုး stacked ဖြစ်ပါတယ် 1.When, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမနို့ဆီရေရှိရပါမည်။ 2.The လေကြောင်းစောင်ရေသံကြိုးသိမ်းဆည်းရှိရာဂိုဒေါင်ထဲမှာသိုထားရပါမည်။ အဆိုပါ rel ...
အဘယ်ကြောင့် Bundle နှင့်အတူထုပ်ပိုးအတွက် skew လည်းမရှိ ...
အဘယ်ကြောင့်ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦး skew ရှိသလော အဆိုပါ skew များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ? အဖြေကိုရှာတွေ့မှငါနှင့်အတူ လာ. : သိုင်းကြိုးလည်းအစုအဝေးဟုခေါ်ထုပ်ပိုး။ ဒါဟာ polyethylene, polypropylene စေး, အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အအေး-ရှင်းပြီချွတ်အဖြစ်နိုင်လွန်ခြင်းနှင့် polyester ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ extruded တလမ်းဆန့ ...
Gaomi JinHe သတ္တုထုတ်ကုန်များစက်ရုံမိုယန်, ကမ္ဘာပေါ်မှာစာပေအတွက်နိုဘယ်ဆုရဲ့ဆုရှင်၏ဇာတိမြို့တွင်တည်ရှိသည် - Gaomi စီးတီး, ရှန်ဒေါင်း Province.It Qingdao (Qingdao ဆိပ်ကမ်း) ၏အနောက်ဘက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့် Weifang မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ ။ JiaoJi မီးရထားနှင့် QingYin အမြန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တည်နေရာနဲ့အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ Gaomi စီးတီးကူး။
ADD: လိပ်စာ: 666 မူလစာမျက်နှာချည်မျှင်လမ်း, gaomi မြို့, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်